युवा तथा महिला लक्षित उद्यमलाई आकर्षित गर्न सके मुलुकमा छिट्टै विकास हुनेः अर्थमन्त्री खतिवडा - Everest Dainik - News from Nepal
युवा तथा महिला लक्षित उद्यमलाई आकर्षित गर्न सके मुलुकमा छिट्टै विकास हुनेः अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । उद्यमशीलताको इको सिस्टमभित्र आउने विषयमा चाहे व्यक्ति हुन, चाहे परिवार हुन, चाहे ती संगठित संस्था नै किन नहुन, चाहे ती समाजका सामुदायिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाहरुनै किन नहुन् । उद्यमशीलता विकासमा तिनीहरुको भूमिका कति प्रवल हुन्छ भन्ने विषय बुझन जरुरी छ । हाम्रो समाजको संरचनाले सामाजिक परिपाटीले ल्याएका पेशागत कतिपय विभाजनको कारण हाम्रो उद्यमशीलतामा कही कतै कठिन भएको छ, की भन्ने तर्क गरिनु स्वभाविक हो ।
याे पनि पढ्नुस बुधबार कहाँ–कहाँ वर्षा हुने सम्भावना छ ?
याे पनि पढ्नुस कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै
होम स्टे चलाएर धेरै परिवार चलेका छौं । हामी पर्यटन वर्ष मनाउँदै छौं । शहरमा आउने पर्यटकलाई गाँउमा लैजाने कुरा गर्दैछौं । म अलि बढी सहकारीलाई जोड दिन्छु । त्यो सामाजिक काम गर्ने संस्था हो । त्यसमा मुनाफा न्यायिक वितरण हन्छ । सहकारी मोडलको उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । २५ देखि ५० प्रतिशत अनुुदानको कुरा छ । तपाईहरु मिलेर सहकारीको मोडलमा आउने हो भने सहुुलियत बढछ । यसले पुँजी निर्माण हुन्छ । राज्यले पनि तपाईलाई सम्मान गर्छ ।
(प्रस्तुति यमन पौड्याल मन्त्रीज्यूको सचिवालय । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले युवा परिपद्ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा युवा उद्यमी सम्मेलनमा व्यक्त गरिएका विचार ।)
ट्याग्स: काठमाडौं, युवराज खतिवडा